Thwebula Folder Lock 7.6.4 – Vessoft
Thwebula Folder Lock
Ifolda Lock – isofthiwe ukuvikela ulwazi oluyimfihlo umsebenzisi ngokumelene wokubuka futhi ekopisha. Isofthiwe kwenza ukufihla amafayela ahlukahlukene, amafolda kanye ngemoto zendawo, ngokufihla noma usethe iphasiwedi ngabo. Ifolda Lock uyakwazi ukuvimba ukufinyelela idatha kwi flash drive, imemori khadi, CD, ama-DVD kanye namanye amadivayisi eziphathwayo. Isofthiwe ikuvumela ukuba idatha isipele futhi sigcine ulwazi isitoreji ifu. Ifolda Lock futhi esusa umlando, amafayela residual nezinye iminonjana umsebenzi ohlelweni.
Uvala of the amafolda kanye namafayela
Ukubethela yedatha kumadivayisi eziphathwayo
Amazwana on Folder Lock:
Folder Lock Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... Proxifier 3.28 Standard futhi Portable
Isithombe Isofthiwe ukwakha passport size izithombe nokwandisa ukuba ezindinganisweni zamazwe ehlukene. Isofthiwe kwenza ukuguqula izithombe singene yohlelo ezidingekayo zokunyathelisa.
English, Afrikaans, Українська, Français... Manycam 5.6.1.4